Koonfur Afrika: qofkii sharci darada ahaa ee lagu eedeeyay maroodi oo la cunay libaaxyo - TELES RELAY
ACCUEIL » International Koonfur Afrika: qof sharci darro ah oo lagu eedeeyay inuu maroodi ku burburay libaaxyo
Koonfur Afrika: qof sharci darro ah oo lagu eedeeyay inuu maroodi ku burburay libaaxyo
Nin looga shakisan yahay inuu ugaarsi lahaa raadinta rinoceros ee Koonfur Afrika ee Kruger National Park ayaa lagu tuntay by maroodiga ka hor inta aan loo baahnayn in la cuno libaaxyada, waaxda park park (SanPark) ayaa sidaas sheegay Isniintii.
Dhacdadan ayaa waxaa soo ifbaxay dhibbanaha eedeeymaha la sheegay, kuwaas oo ku wargaliyay qoyskiisa in uu la jajabiyay by pachyderm April April, 2, afhayeenka SanPark, Isaac Phaahla, ayaa AFP u sheegay.
Qoyska ayaa markaa wargeliyay maamulka beerta, oo bilaabay "dantu" isagoo raadinaya haraaga maydka.
Inkastoo baaritaan xooggan, waxay awoodeen in ay helaan khamiistii la soo dhaafay. "Joogitaanka koox libaaxyo ah ayaa lagu xaqiijiyay aagga waxayna u muuqataa inay cuneen jidhka dhibbanaha," ayuu yiri Phaahla, isaga oo intaa ku daray in falanqayntu ay socotay si loo xaqiijiyo.
"Inaan soo galno Beerta Qaranka ee Kruger si sharci-darro ah oo socod aan ammaan ahayn," ayuu yiri Kruger Park Glenn Phillips, "Waa arrin khatar ah oo dhacdadani waa mid cusub. caddayn ".
Afarta nin ee udubdhexaadiyaha ah ayaa loo xiray in lagu soo bandhigo garsoorka.
Sannad kasta, kumanaan wiyil ayaa lagu gowracay Afrika, geesahoodii, oo ay aad u qiimeeyaan dhaqaatiirta dhaqanka ee Shiinaha ama Vietnam.
Waxaa weli ku jira 5.000 qaybaha wiyisha madow ee qaarada Afrika, oo ay ku jiraan ku dhowaad 1.900 ee Koonfur Afrika. Wadanku sidoo kale wuxuu ku nool yahay qaar ka mid ah wiyisha cadcad ee 20.000, ama 80% dadka adduunka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/08/afrique-du-sud-un-braconnier-presume-ecrase-par-un-elephant-puis-devore-par-des-lions/
Morocco: Labo qof oo reer binu Israa'iil ah ayaa loo xiray Morocco si sharci-darro ah loogu helo waraaqahooda
Zimbabwe oo magdhaw siinaya beeralayda caddaanka ah ee laga eryay Mugabe